Kambodza : Ny Politikan’ny Vary · Global Voices teny Malagasy
Kambodza : Ny Politikan'ny Vary
Nandika (fr) i Samantha Deman
Voadika ny 21 Aogositra 2018 5:10 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, Português, 简体中文, 繁體中文, 日本語, বাংলা, English
Tsy hoe singa fototra amin'ny sakafo kambodziana fotsiny ny vary. Mitana anjara toerana ihany koa izy amin'ireo resaka zo momba ny fananantany, ny varotra ary ny fifandraisana iraisampirenena.
Lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ny bilaogy The Mirror [angl] no ahafahantsika mahita topimaso amin'ny hasosoran'ireo Kambodziana, isan'ireny i Cheam Yeap, iray amin'ireo mpitarika ny antokom-bahoaka kambodziana, vokatry ny fampanofàna tany kambodziana amin'i Vietnam mpifanila vodirindrina aminy. Tanisain'ny The Mirror ny gazety Cheat Khmer (Vol. 1, #40, 18.3.2009) :
Tanim-pirenena an'arivony hektara marobe ao amin'ny faritanin'i An Giang, akaikin'ny faritr'i Svay Rieng sy Prey Veng ary mitatra manaraka ny sisintany iraisana amin'i Vietnam, no hofain'ny orinasa vietnamiàna amin'ireo manampahefana khmers mba hahafahany mampitombo ny velarantany fambolena ho an'ny sehatry ny indostriam-pambolena. Navoakan'ny Phnom Penh Post ny kahatsoratra iray tamin'ny 26 Febroary farany teo, mitatitra ny tenin'ny governoran'ny faritanin'i Svay Rieng, Atoa Cheang Am, izay nilaza fa tsy ho ela ireo fifanarahana momba ireo tany 10.000 hektara ao Svay Rieng, miparitaka manaraka ny sisintany, dia homena ireo orinasa vietnamiàna. Etsy andaniny, nambaa tao amin'ny Phnom Penh Post ny governoran'ny faritanin'i Prey Veng, Atoa Ung Samy, fa hanomboka ny fifampioresahana iarahany amin'ireo tomponandraikitra politka vietnamiàna momba ireo tanimbary ao amin'ny sisiantany izay ampanofaina amin'ireo orinasa vietnamiàna mba hahafahan'izy ireo mamboly vary any amin'ny tanin'ny khmer.
Mampanahy an'i Yeap ny zavamisy sao hivadika ho titra filazana ny maha-tompon'ny tany ireo fifanarahana, ka hampihena ny velarantany kambodziàna. Ireo hafa toa an'i Prum Soanara, injeniera, mihevitra fa hahazoana tombony kokoa ny tany raha atolotra ho an'reo mponina mba hovolena vary.
Tsindrian'ny bilaogy KI Media [angl.] ny momba ny resaka fanafarana vary avy any ivelany, amin'ny filazany ny lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ny The Nation :
Eo ampiomanana hanolotra tolokevitra ho an'ny antenimieran'ny varotra ao Thailandy ny fikambanan'ireo Thai mpanondrana vary mba hametrahana rantsana iray ho toy ny sompitra hamatsy ny “masoivoho mpanondrana” mba handrindràna ny fanafarana vary, indrindra fa efa fantara hoe ny fifanarahana fifanakalozana malalaka ao anatin'ny Asean (Afta) dia manome antoka ny tsy hisian'ny fandoavana haba amin'ireo fanafarana.
Handrafitra ireo fepetra fiarovana ny tantsahah Thai ilay masoivoho, toy ny fitakiana ny tsy hampiasàna ny vary nafarana ho toy ny voakatra voalohany fanodina ho an'ny indostria . Kanefa, atahoran'ireo mpanodrana ny karazana fepetra tahaka izany sao handrisika ireo izay mikatsaka ny hamilivily ny rafitra, ary hampitombo ny hadirinny vary ifanakalozana amin'ny fomba tsy ara-dalàna, tafiditraanatin'izany ny vary volena ao Kambodza.
Ankoatra ny tena fampiasàna azy mivaingana, araka ny asehon'ity lahatsary ity, dia endrika mampiavaka ny kolontsaina kambodziana ny vary, Ity lahatsary ity, novokarin'ilay mpampiasa Youtube Khmer Civilization, dia mamondrona ireo sary momba ny vary, manomboka any amin'ny toerana famokarana azy ka hatreny an-tsena :
Avy ao amin'ny pejy Nohch ao amin'ny Flickr ny sarikely nampiasain'ny lahatsoratra.
Fiteny 16 Novambra 2021
Fahalalahàna miteny 06 Septambra 2021
Fahalalahàna miteny 03 Septambra 2021